November 2016 - ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ)
လာမည့်နှစ်တွင် ကျရောက်မည့် iPhone ကို စတင်မိတ်ဆက်သည့် (၁၀) နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်တွင် Apple က ကွေးညွှတ်ထားသည့် screen ပါဝင်သော iPhone ...
ကွေးညွှတ်ထားသည့် screen ပါဝင်သော iPhone ကို Apple စမ်းသပ်နေ Reviewed by Thiha Htike on 3:24 PM Rating:5လာမည့်နှစ်တွင် ကျရောက်မည့် iPhone ကို စတင်မိတ်ဆက်သည့် (၁၀) နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်တွင် Apple က ကွေးညွှတ်ထားသည့် screen ပါဝင်သော iPhone ...
Thiha Htike at 3:24 PM No comments:
Tuesday, November 29, 2016 Thiha Htike No comments နိုင်ငံတော်၏ စီးပွားရေးဆိုင်ရာမူဝါဒများတွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ်အများစုပါဝင်ြေ...
နိုင်ငံတော်၏ စီးပွားရေးဆိုင်ရာမူဝါဒတွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ်အများစုပါဝင်ကြောင်း သိရ Reviewed by Thiha Htike on 3:21 PM Rating:5Tuesday, November 29, 2016 Thiha Htike No comments နိုင်ငံတော်၏ စီးပွားရေးဆိုင်ရာမူဝါဒများတွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ်အများစုပါဝင်ြေ...
Thiha Htike at 3:21 PM No comments:
အသစ်ထွက်မည့် iPad က Home ခလုတ်မပါသည့် ပထမဆုံး iOS ထုတ်ကုန် ဖြစ်လာဖွယ်ရှိ
လာမည့်နှစ် အစောပိုင်းတွင် ထွက်ရှိမည်ဟု ကောလာဟလသတင်း ထွက်ပေါ်နေသော ၁၀.၉ လက်မ iPad တွင် physical home ခလုတ် ပါဝင်မည် မဟုတ်ကြောင်း၊ အဆို...
အသစ်ထွက်မည့် iPad က Home ခလုတ်မပါသည့် ပထမဆုံး iOS ထုတ်ကုန် ဖြစ်လာဖွယ်ရှိ Reviewed by Thiha Htike on 3:18 PM Rating:5လာမည့်နှစ် အစောပိုင်းတွင် ထွက်ရှိမည်ဟု ကောလာဟလသတင်း ထွက်ပေါ်နေသော ၁၀.၉ လက်မ iPad တွင် physical home ခလုတ် ပါဝင်မည် မဟုတ်ကြောင်း၊ အဆို...
Thiha Htike at 3:18 PM No comments:
ပြည်တွင်းတွင် UPI ကတ်အသုံးပြုသူ တစ်သိန်းခွဲနီးပါးရှိ
Tuesday, November 29, 2016 Thiha Htike No comments မန်မာနိုင်ငံတွင် UPI ကတ်အသုံးပြုသူ တစ်သိန်းခွဲ နီးပါးအထိရှိလာကြောင်း သိရသည်။...
ပြည်တွင်းတွင် UPI ကတ်အသုံးပြုသူ တစ်သိန်းခွဲနီးပါးရှိ Reviewed by Thiha Htike on 3:14 PM Rating:5Tuesday, November 29, 2016 Thiha Htike No comments မန်မာနိုင်ငံတွင် UPI ကတ်အသုံးပြုသူ တစ်သိန်းခွဲ နီးပါးအထိရှိလာကြောင်း သိရသည်။...
Thiha Htike at 3:14 PM No comments:
အရည်အသွေးကောင်း အာမခံအပြည့်ရှိ လက်ရှိဈေးကွက်မှာ ကြို့က်ရာနဲ့ယှဉ်လို့ရတဲ့ Korea Smartphone(Marcus)
မင်္ဂလာပါ! ဆွေသဟာ Mobile Distribution ကပါ။ မင်္ဂလာပါ Korea နိုင်ငံသိတယ်မလား ဒီနိုင်ငံကနေပြီးတော့ ယခု Smartphone လေးတွေရောင်းချပေးနေတယ်လေ သိ...
အရည်အသွေးကောင်း အာမခံအပြည့်ရှိ လက်ရှိဈေးကွက်မှာ ကြို့က်ရာနဲ့ယှဉ်လို့ရတဲ့ Korea Smartphone(Marcus) Reviewed by Thiha Htike on 3:12 PM Rating:5မင်္ဂလာပါ! ဆွေသဟာ Mobile Distribution ကပါ။ မင်္ဂလာပါ Korea နိုင်ငံသိတယ်မလား ဒီနိုင်ငံကနေပြီးတော့ ယခု Smartphone လေးတွေရောင်းချပေးနေတယ်လေ သိ...
Thiha Htike at 3:12 PM No comments:
သင်ဒီစာဖတ်ပြီး ကျပ် သိန်း၁၀၀၀ ရယူပါ။
မင်္ဂလာပါ! ဆွေသဟာ Mobile Distribution ကပါ။ ကျပ်သိန်း၁၀၀၀ ရယူလိုက်ပါဆိုတာ အောက်တွင်စာလေးဆုံးအောင်ဖတ်စေချင်ပါတယ် အဆုံးကိုကျော်ဖတ်ရင်တော့ အဖြေ...
သင်ဒီစာဖတ်ပြီး ကျပ် သိန်း၁၀၀၀ ရယူပါ။ Reviewed by Thiha Htike on 4:20 PM Rating:5မင်္ဂလာပါ! ဆွေသဟာ Mobile Distribution ကပါ။ ကျပ်သိန်း၁၀၀၀ ရယူလိုက်ပါဆိုတာ အောက်တွင်စာလေးဆုံးအောင်ဖတ်စေချင်ပါတယ် အဆုံးကိုကျော်ဖတ်ရင်တော့ အဖြေ...
Thiha Htike at 4:20 PM No comments:
ဖုန်းဆိုင်များအား Smartphoe မျိူးစုံ ၊ Accessories၊ Hardware Sparepart များ ၊ လက်ကားဈေးဖြင့်ရောင်းချပေးနေပါပြီ။
မင်္ဂလာပါ ! ဆွေသဟာ Mobile Distribution မှ ကြိုဆိုပါတယ် ... ဖုန်းဆိုင်ပိုင်ရှင် လူကြီးမင်းတို့ကို ဆွေသဟာMobile Distributi...
ဖုန်းဆိုင်များအား Smartphoe မျိူးစုံ ၊ Accessories၊ Hardware Sparepart များ ၊ လက်ကားဈေးဖြင့်ရောင်းချပေးနေပါပြီ။ Reviewed by Thiha Htike on 4:17 PM Rating:5မင်္ဂလာပါ ! ဆွေသဟာ Mobile Distribution မှ ကြိုဆိုပါတယ် ... ဖုန်းဆိုင်ပိုင်ရှင် လူကြီးမင်းတို့ကို ဆွေသဟာMobile Distributi...
Thiha Htike at 4:17 PM No comments:
System.img ဖိုင်ကို တစ်စစီ Extract ဇစ်ဖြည်ထုတ်နည်း
System.img ဖိုင်ကို တစ်စစီ Extract ဇစ်ဖြည်ထုတ်နည်းကို အလိုရှိနေကြတဲ့ ညီအကိုတွေအတွက် ပြန်လည်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Android Devices အများစုဟာ...
System.img ဖိုင်ကို တစ်စစီ Extract ဇစ်ဖြည်ထုတ်နည်း Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 12:00 AM Rating:5System.img ဖိုင်ကို တစ်စစီ Extract ဇစ်ဖြည်ထုတ်နည်းကို အလိုရှိနေကြတဲ့ ညီအကိုတွေအတွက် ပြန်လည်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Android Devices အများစုဟာ...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 12:00 AM No comments:
သူငယ်ချင်းအချစ်( Yar hu feat.saw htet) ~~ တိတ်တခိုးချစ်နေသော သူငယ်ချင်းများအတွက်...
Song Title:သူငယ်ချင်းအချစ်(Friend Love) Song Artist:Saw Htet + Yar Hu Post by Thiha Htike ဒုတိယမြောက်သီချင်းလေးပါ သီချင်...
သူငယ်ချင်းအချစ်( Yar hu feat.saw htet) ~~ တိတ်တခိုးချစ်နေသော သူငယ်ချင်းများအတွက်... Reviewed by Thiha Htike on 3:12 PM Rating:5Song Title:သူငယ်ချင်းအချစ်(Friend Love) Song Artist:Saw Htet + Yar Hu Post by Thiha Htike ဒုတိယမြောက်သီချင်းလေးပါ သီချင်...
(Holiday song) New Song (ဒီသီချင်းကို အားလပ်ရက်မှာပဲနားထောင်ပါ အားလပ်ရက်ထက်ကျော်ရင်တာဝန်မယူပါ)
သီချင်းသစ်လေးပါဗျာ နားထောင်သူများကတော့ အားလပ်ရက်လေးမှားနားဆင်ရင်ပိုကောင်းတာပေါ့ဗျာ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သီချင်းနာမည်က " အားလပ်ရက်...
(Holiday song) New Song (ဒီသီချင်းကို အားလပ်ရက်မှာပဲနားထောင်ပါ အားလပ်ရက်ထက်ကျော်ရင်တာဝန်မယူပါ) Reviewed by Thiha Htike on 11:56 AM Rating:5သီချင်းသစ်လေးပါဗျာ နားထောင်သူများကတော့ အားလပ်ရက်လေးမှားနားဆင်ရင်ပိုကောင်းတာပေါ့ဗျာ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သီချင်းနာမည်က " အားလပ်ရက်...
Thiha Htike at 11:56 AM No comments:
ကိုယ့်ရဲ့ ဖုန်းမတော်တဆ ပျက်စီး၊ ပျောက်ဆုံးမှု ဖြစ်ရင်တော့ ကိုယ့်ရဲ့ အချက်အလက်တွေကို ဆုံးရှုံးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Google ကနေ Drive ဆိုတဲ့ ...
Android ဖုန်း၏ အချက်အလက်များကို Google Drive တွင် Backup ပြုလုပ်ခြင်း Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 8:18 AM Rating:5ကိုယ့်ရဲ့ ဖုန်းမတော်တဆ ပျက်စီး၊ ပျောက်ဆုံးမှု ဖြစ်ရင်တော့ ကိုယ့်ရဲ့ အချက်အလက်တွေကို ဆုံးရှုံးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Google ကနေ Drive ဆိုတဲ့ ...
PC ကို စတင်ဖွင့်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ စက်ကို အသုံးမပြုတဲ့ အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ် Lock ပြုလုပ်ထားရင် Lock Screen နေရာမှာ Shutdown ...
Windows 10 Login Screen မှ Shutdown ခလုတ်ကိုဖယ်ရှားခြင်း Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 8:09 AM Rating:5PC ကို စတင်ဖွင့်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ စက်ကို အသုံးမပြုတဲ့ အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ် Lock ပြုလုပ်ထားရင် Lock Screen နေရာမှာ Shutdown ...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 8:09 AM No comments:
Auslogics Driver Updater 1.9.1|8.2 Mb+Full Crack
မိမိတို့ကွန်ပျူတာ Window System မှာ လိုအပ်နေတဲ့ Driver တွေကိုUpdate ပြုလုပ်ပေးမယ့် Driver Upd ater သုံးစွဲဖို့အရိုးရှင်းဆုံးထဲကတစ်ခြု...
Auslogics Driver Updater 1.9.1|8.2 Mb+Full Crack Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 5:46 PM Rating:5မိမိတို့ကွန်ပျူတာ Window System မှာ လိုအပ်နေတဲ့ Driver တွေကိုUpdate ပြုလုပ်ပေးမယ့် Driver Upd ater သုံးစွဲဖို့အရိုးရှင်းဆုံးထဲကတစ်ခြု...
ဈေးနူန်းချိူသာပြီး အာမခံအပြည့်ဖြင့်ဝင်လာသော NIPDA ယိုးဒယား Handset အထူး Promotion(3.11.2016 to 10.11.2016)
ဈေးနူန်းချိူသာပြီး အာမခံအပြည့်ဖြင့်ဝင်လာသော NIPDA ယိုးဒယား Handset အထူး Promotion(3.11.2016 to 10.11.2016) Reviewed by Thiha Htike on 12:31 PM Rating:5ဈေးကွက်ထဲကို ၀ယ်သူဦးစားပေးဈေးနူန်းချိူတဲ့ NIPDA ယိုးဒယားHandest(smart phone) အဖြစ်ဝင်ရောက်လာတာပါ... ဒီနေရာမှာ သွားရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်.....
Thiha Htike at 12:31 PM No comments: